Microsoft SQL Server iyo Linux sanadka 2017 | Laga soo bilaabo Linux
brodydalle | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias, Shabakado / Adeeg
Isagoo ka hadlaya waxyaabo aragti ka dhigaya, waxaa jira dhaqdhaqaaqyo badan oo sii kordhaya oo shirkaddan weyn ee loo yaqaan 'Redmond' ay sameyneyso si ay ugu soo bandhigto xallinta adduunyada bilaashka ah iyo mararka qaarkood ee aan ahayn mid xor ah oo Linux ah.
Hada isaga blog si rasmi ah ugu dhawaaq in Microsoft SQL Server laga heli doono barnaamijyada Linux qiyaastii 2016 - 2017. Marka la eego fikradda ah in himilooyinka iyo himilooyinka cusub ee Microsoft aysan ahayn oo kaliya in la iibiyo nidaamka hawlgalka laakiin sidoo kale xalka loogu talagalay maareynta xogta, raadinta in la kala duwo, in tartan badan loo sameeyo shirkadaha sida Oracle, in kasta oo ay iyagu leeyihiin waxay haystaan ​​40% suuqa maareynta xogta labada Windows iyo Linux.
Gaar ahaan, waxay umuuqataa talaabo aad u xeel dheer oo ay sameysay Microsoft, laakiin sidee ama sidee ugufiicnaan doontaa isdhexgalkeedu dhanka Linux? Ma garanayo, waa inaan sugno inaan sugno noocyada tijaabada hore iyo isbarbardhiga sida ay ugu shaqeyso Linux marka loo eego Windows.
Xaqiiqdu waxay tahay in Microsoft ay aad iyo aad ugu sii lumineyso adduunka nidaamyada iyo server-yada, sidaa darteed layaab ma leh in dhaq-dhaqaaqyo badan oo qaabkan ah, gaar ahaan waxaan la kulmay deegaanno ay ku isticmaalaan Windows Server oo leh Microsoft SQL Server halkaasoo aanan ka heli karin. in heshiis laga gaaro socdaalka si loo helo xog-ururin bilaash ah, sidaa darteed waxaan ku dhiiran lahaa inaan siiyo fursad ay ugu yaraan ku ciribtiraan mid ka mid ah qodobbadaas sida Windows Server oo lagu rakibo Linux iyo Microsoft SQL Server. Waxaan ku sameeyay macaamiisha isticmaala Oracle iyo Windows, taas oo cadeyneysa in Oracle iyo Linux ay sidoo kale yihiin kuwo isku dhafan.
Dabcan, kahor intaadan i weydiinin, MAAHA FURSAD, MA iloobi seenyadaas (ugu yaraan hada), waxaa lagu heli doonaa ruqsadaha lahaanshaha, lacag bixinta iyo waliba koodhka xiran. Tartanku wuu yeelan doonaa, waana ku filan yahay! oo leh postgres, mysql, mariadb, oracle, iyo kuwo kale, si kastaba ha noqotee wuxuu ogyahay sida loogu dhaqaajiyo kaararkiisa xulafada koofiyad cas iyo ubuntu arrimo ay ka mid yihiin Azure.
Daciifnimo ama istiraatiijiyad? Miyaynu ku dhacaynaa dabin? Waxaan sugayaa faallooyinkaaga
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Microsoft SQL Server iyo Linux sanadka 2017
Aad baan ula yaabay dabeecaddan. Windows-ka waxaa lagu dhaqaajiyaa lacag iyo lacag mooyee wax kale. Waa inaan sugnaa si aan u aragno waxa uu riwaayaddiisu tahay.
taas waan ku raacsanahay, wax walba waxaa loogu talagalay doofaarka $ lacag hahaha
way xun tahay inaad rabto inaad lacag ka qaaddo alaab tayo leh
Jawaabtu waa isku mid markay "MS-Office for Linux" soo baxdo:
«GNU / Linux World waxay u guurtaa MS / Linux. Ma aqaano sababta aanan u jeclayn waxaas oo dhan haba yaraatee! »
Waa inay ku fikireen: "Ma burburin karno Linux, laakiin waan baabi'in karnaa GNU."
Maya, waa si fudud cabir quus ah wajiga daadadka nidaamyada iskudhafyada badan.
Tani waxay kuugu fiicantahay adoo ah maamulaha IT-ga, maadaama aad horeyba ula shaqeyn jirtay Oracle iyo Linux, waxaad kaloo abuuri kartaa SQL server iyo bii'ado Linux ah, kuwaas oo ay tahay in la bixiyo haddii, laakiin aan la xisaabin shatiga OS, tani waxay saameyn ku yeelanaysaa kharashyada hawlgalka Waxaan jecelahay inay waxyaalahaas oo kale qaataan maxaa yeelay waxay abuurtaa tartan cidii doontana wayna isticmaali kartaa, ha xukumee.
waxaad kuheysaa dhibic wanaagsan halkaas, tartanka iyo duruufaha udub dhexaadka u ah sida oracle iyo Linux. Waan arki doonaa waxa dhaca mustaqbalka
Qiyaas aad u fiican.
Microsoft waxay sameysaa wax soo saar wanaagsan, kaliya inta ugu liidata ayaa ah tan ugu isticmaalka badan (Windows).
SQL Server waa madal xog ururin fiican, oo aan lagu xusin awooda lagu heli karo iyadoo la adeegsanayo .NET iyo aaladaha isdhexgalka ee ay leedahay barnaamijka .NET. Runtii waa wax aad u wanaagsan.
Waxaan u maleynayaa in taas loo keeno Linux waxay siinaysaa qalab aad u fiican oo shaqeynaya.
Waxaan u maleynayaa in MS lagu keydin lahaa iyadoo laga saarayo serverka OS-ku-saleysan OS 😛
Dhaqdhaqaaqa MS waxaa ka mid ah sii deynta nambarka .NET, hubaal intaas oo lagu daray tallaabooyinkan, iyo isbahaysiyo lala yeesho kuwa kale ee waaweyn adduunka Linux, waxay u horseedi karaan wax qaabkaas ah Waad ku mahadsantahay faalladaada
Amelie diidid dijo
Talaabadani waa dacaayad Microsoft ah, ku dhawaaqida SQLServer ugama tageyso wax cusub GNU / Linux; waxaan haynaa MariaDB iyo qalab kale. Waxaan u maleynayaa in tan (iyo aqoonyahanno badani ay muujiyeen) ay tahay inay xukumaan suuqa gaarka loo leeyahay iyagoo dadweynaha ka dhigaya inay aaminaan in "Malwaresoft" <3 Linux ... Muxuu isticmaalaha GNU / Linux (oo leh falsafad wanaagsan ee Software-ka Bilaashka ah) uu doonayo inuu bixiyo shati aad qaali u ah oo uusan awoodin inuu eeg koodhka adoo adeegsanaya shaygan loo yaqaan SQLServer. Farxad!
haddii aan ku raacsanahay inaysan ku soo kordhinayn wax "cusub", laakiin haddii ay jiraan dad u socda "inay bixiyaan shati aad u qaali ah oo aan awood u lahayn inay arkaan koodhka iyagoo adeegsanaya shaygan loo yaqaan SQLServer" ... rumee, waxaad arki doontaa XD. Waxay ku sameeyaan Oracle
Adduunyada shaqada, marar badan wax walba maahan sidaad rabto, waana inaad u aqbashaa sida ay wax yihiin, ama aad ka tagtid.
Waxaa jira DBs badan oo bilaash ah (PostgreSQL waxay ila tahay aniga gaar ahaan masterpiece), laakiin sidoo kale waxaa jira xaqiiqda ah in shirkado badan ay horeyba u hubeysnaayeen oo ay ugu shaqeeyaan habka X.
Hadday haystaan ​​deegaan .NET ah, oo ay u arkaan inay faa'iido leedahay in la adeegsado Linux oo la dhigo SQL Server halkaas ayay ku qaban doonaan, hubaal iyagoon dan ka lahayn waxa ay bulshada u soo kordhinayso, waxna kama tari doonto haddii wacdiyuhu yimaado oo yidhaa «tan iyo markii aad dhigtay Linux, maxaad u isticmaali weyday MariaDB ama PostgreSQL? ”, Kaas oo u baahan waqti, tababar, iwm.
Waa inaad bulshada ka soocdaa suuqa. Bulshadu waxay ka fikirtaa bulshada, iyo wax ku saabsan suuqa (si toos ah uma toosna, laakiin waa maxay software-ka la adeegsado iyo sida loo isticmaalo), laakiin suuqa ayaa kaliya daneeya suuqa.
Ciise Perales dijo
Adduunyada shaqada iyo meel kasta oo ay jiri doonaan dad u baahan inay u adeegsadaan waxaas naxdinta leh sababo aad u yaab badan, waxba kuma laha xD farsamada waxaanan runtii jeclaan lahaa inay ilaashadaan taranka ay ka haystaan ​​inay adeegsadaan qalabkooda ay isku dayaan ma noo iibisaa sidii shirkad furan maxaa yeelay hadda waxay ku shaqeeyaan GNU / Linux? Runtii ma jiraan dad adeegsada GNU / Linux oo rumeysan waxa ay sameyneyso Microsoft? Shaqsiyan uma maleynayo, dadka rumeysan inay yihiin dad adeegsada qaar ka mid ah qalabkeeda oo ay horeyba u yihiin macaamiishooda iyo kuwa aan xasuusan dukumintiyada halloween, ugu dambayntii ilaahay ha inagu anfaco.
Ku jawaab Jesús Perales
Way fiican tahay in la ahaado il furan, laakiin waxaan ku siinayaa tusaale, waxaad leedahay jawi hawlgal oo dhan oo ku saleysan teknoolojiyadda. MS jacayl sidoo kale), waad ku sii socotaa midaas si aadan u kala dirin qorshaha oo aad waqti iyo lacagba u lumin.
Ma aaminsani in MS wax uun ku soo kordhinayaan adduunka barnaamijyada bilaashka ah, waxay qalab siineysaa adduunka server-ka Linux.
Si xiiso leh, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado heerka aqoontaada ee matoorada macluumaadka si aan u idhaahdo SQL Server waa wax iska caadi ah, ama waxaa loo isticmaalaa sababo la yaab leh oo aan farsamo lahayn, markay tahay matoor aad iyo aad u sareeya MySQL, matoor horyaal barnaamijka bilaashka ah (taas oo si la yaab leh, marwalba ku hoos jirtay dalladda shirkadaha, Sun kahor, iyo hadda Oracle), ama Mariadb, oo leh cillado isku mid ah sida MySQL.
Tusaale ahaan, mashiinka 'MySQL' ee caadiga ahi ma taageerayo macaamil ganacsi, iyo adeegsiga aad u xaddidan ee tusmooyinka, ama inuu mid kale kuu tuuro, MySQL waa mid caqli badan, oo markaan weydiisanno inay sameyso qayb ahaan 0, ma soo celinayso ka reebitaan ama qalad, laakiin qiimaha guud ee null, oo ay tahay inaan ka xakameeyo softiweerka uu u dhigmo, maxaa yeelay mishiinku ma ogaanayo inay tahay hawl aan ansax ahayn.
Runtii waan qadariyaa bulshada softiweerka bilaashka ah, markasta oo aan kari karana waxaan isku dayaa inaan sameeyo xoogaa yar, laakiin maskaxda ka maydhista qaar ayaa calaacal ah.
Ma ihi DBA, waxaan horumariyo barnaamijyada Java EE oo jawigayga waxaa jira wax la yiraahdo JPA, marna kama hadlin MySQL bedel ahaan SQL Server, keydadka macluumaadka waxaa ku jira waxyaabo kale oo badan (postgresql, Mongo, rethinkdb, iwm), dhibaatooyin la xiriira SQL Server-ka aniga taabtay ayaa ah sida ay u adagtahay inay awood u siiso xawaaladaha XA, anigoo xusaya in server-yada ay tahay in laga ilaaliyo antivirus iyo waxyaabaha kale ee caadiga u ah Windows iyo dhamaan dhibaatooyinka OS-kan had iyo jeer la yimaado, hada hadii aad ku horumariso .NET waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa adeegsiga SQL Server, ma lihid xulasho kale.
Fikrado kala duwan oo dabiici ah ama looga soo horjeedo dabiiciyan, waxa xiisaha leh ee arrintan ku saabsan ayaa ah in xaalado badan loo abuuray in laga kala xusho Sida laga soo xigtay dadka Microsoft waxay ku andacoodaan inaad ka fiicnaato waxqabadka SQL Server ee ku shaqeeya Linux marka loo eego tartankeeda Oracle. Waxay noqon doontaa run, waxay noqon doontaa sugitaanka natiijooyinka.
AmayaOS 0.08 waa la siidaayay